Tsara ny vokatra azon’ny Cnaps sport teo amin’ny CCCOI - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Mandray anjara amin’io fifanintsanana io i Madagasikara ary ny ekipan’ny Cnaps Sport no misolontena ny Nosy amin’izany fifanintsanana. Miray vondrona amin’ny Cnaps sport ny M’Tsapere avy any Mayotte sy ny Steal Nouvel avy any Kaomoro.
Ny Football Club M’Tsapere na FCM avy any Mayotte no nihaona voalohany tamin’ny Cnaps sport lalao natao ny alahady 23 okitobra izany.
Somary nilamindamina ny lalao nandritra ny fito minitra voalohany. Nahazo fanafihana indroa ny FCM ary azon’i Jolce Emile mpiandry tsatoby an’ny Cnaps Sport izany. Marihina fa tsy nilalao i Leda mpiandry harato tompon-toerana fa i Jolce Emile no najoro tamin’ity lalao ity.
Tsara ny lalao amin’ny ankapobeny satria dia tena afaka nampivezivezy baolina ny Cnaps ary lasa niaro tena fotsiny ny FCM.
Tany amin’ny faha-30 minitra dia nahatafiditra baolina i Niasexe laharana faha-8 tao amin’ny haraton’i Anatole mpiandry haraton’ny FCM.
Nitambesatra tamin’ny FCM ny havizanana vokatry ny fanenjehana baolina izay navezivezin’ny Cnaps.
Io isa 1 noho 0 io no nisarahana teo amin’ny fotoam-pialan-tsasatra.
Teo amin’ny fanombohan’ny fidirana faharoa dia dia nanolo mpilalao ny Cnaps. Nesorina i Elysé izay nahazo karatra mavo ary nampidirina i Toby. Nanindry tanteraka tany amin’ny tanin’ny FCM ny Cnaps Sport.
Tany amin’ny minitra faha-70 dia nahatafiditra baolina faharoa i Niasexe. Dia isa 2-0 no isa tazana teny amin’ny tabilao hatramin’ny farany.
Ny talata faha-25 okitobra no natao ny lalao faharoa. Lalao izay nihaonan’ny FCM sy ny Steal Nouvel Comores. Nivoaka mpandresy ny FCM tamin’ny isa 1-0.
Ny alakamisy 27 okitobra 2016 no nifandona ny Cnaps Sport sy ny Steal Nouvel Comores. Maro ny mpijery tao amin’ny kianja Rabemananjara Mahajanga.
Samy nanana vali-panafihana haingana ny ekipa roa tonta nandritra ny 90 minitra nilalaovana. Tsy nahita hirika nandavahana ny haraton’ny SNC mihitsy ny lohalaharan’ny Cnaps. Ny daka avy lavitra nataon’i Rija avy teny amin’ny 35 metatra no tena tsara saingy nidona tamin’ny tsatoby an’i SNC izany.
Soritana fa ady sahala dia efa ampy ho an’ny Cnaps Sport hanohizany ny dia hiatrika ny lalao famaranana. Dia izay tokoa no nitranga. Nisaraka samy tsy nitoko ny ekipa roa tonta io alakamisy io. Dia ny cnaps Sport izany no voalohany tao amin’ity vondrona ity. Nahazo isa 4 ny Cnaps sport (fandresena iray ary ady sahala iray) raha isa 3 ny an’ny FCM (fandresena iray ary faharesena iray) ary isa 1 ny any SNC (faharesena iray sy ady sahala iray).
Ny Cnaps Sport izany no voalohany tao amin’ny Vondrona A. Mbola tsy fantatra ny hanaovana ny lalao famaranana fa mbola miandry ny an-tsapaka izay mbola hatao.
Marihina fa ity ekipan’ny Cnaps Sport Football eo ambany fanentanan’i Arizaka Rabekoto Raoul dia mbola mandray anjara amina fifaninana roa hafa dia ny Poule des As izany ary koa ny lalao manasa-dalana hihaonany amin’ny Tana Formation lalao hatao ny 6 novambra ho avy izao.
Airtel Madagascar : Sponsor officiel du M’foot Fokontany 2019 - il y a 16 jours
Baolina kitra : Tanterahana ny M’Foot fokontany ao Antananarivo renivohitra - il y a 19 jours